Farming Manager | Min Zar Ni Group of Companies ﻿
13.5.2022, Full time , Trading
•	ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း အတွက် မန်နေဂျာ(၅)ဦး အလိုရှိပါသည်။
•	အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ကွန်ပျူတာအခြေခံတတ်ကျွမ်းပြီးလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ရပါမည်။
•	နေ၊စားငြိမ်း စီစဉ်ပေးပါမည်။
•	စမ်းသပ်ကာလ(၃)လတွင် -လစာ (၃)သိန်းဖြင့်စတင်ခန့်အပ်ပါမည်။
•	(၃)လပြည့်ပါက လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်၍ လစာ(၈)သိန်းခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
•	လုပ်ငန်း၏ Target Goal ပေါ်မူတည်၍ ရရှိလစာ၏ (၁)လစာ၏ (၂)ဆမှ (၄)ဆ အထိ ဆုကြေးခံစားခွင့်ရရှိပါမည်။
•	ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ညောင်တုန်းမြို့နယ်နှင့် ပန်းတနော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ငါးကန်များတွင် သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
Work location No. 4-Kha/1, Hlaing River Bank,Thaung Gyi Taung Quarter, Industrial Zone (1), Part (6),
Hlaing Thar Yar Tsp.,Yangon.
Company Industry: Farming Manager
Farming Manager Agricultural Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Min Zar Ni Group of Companies Agricultural Jobs Agricultural Jobs Farming Manager Jobs in Myanmar, jobs in Yangon